Prostar yave OEM & ODM Services kubva pakuvambwa kwayo muna 1998. With vapfumi chiitiko pakubata vatengi kubvira pose, Prostar anoziva sei kushumira vatengi dzedu zvakanakisisa customization uye pachena inozivikanwa seimwe yakanakisisa Customization Provider ari maindasitiri.
Ichienzaniswa nedzimwe vagadziri vakawanda, Prostar ane munhu R kwedu & D dhipatimendi, injiniya chikwata uye tooling kupesana. The nomumwe mabhizimisi zviumbu prvide renguva basa R & D pamusoro Hardware uye Software zvinodiwa OEM & ODM.
Prostar zvechokwadi anotenda kuti zvakanaka vatengi iri neccessary. Saka, Prostar ane zvakawanda pamusoro pashure-rokutengesa uye provids zvakazara nguva hwindo. All vatengi vari kutenga kubva Prostar aizowana nenguva rubatsiro kuburikidza akatisiira shoko kana achidanidzira vatengi dzedu Hotline redu Support webpage.